Ukuthola ukuthandwa okuningi kwezikhangiso ze-Instagram: Izindlela ezi-8 ezihamba phambili zokulandelwa | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 21, 2019 NgoLwesithathu, Okthoba 14, 2020 Douglas Karr
Umncintiswano uyashisa endaweni yesikhulumi nokho, futhi ama-brand abheke ukuthola okuningi emikhankasweni yabo yezikhangiso ze-Instagram. Enye yezindlela zokusebenzisa zisebenzisa ukukala ukuzibandakanya, futhi inani lomkhiqizo lithola ukuthandwa okuningi. Sizokhuluma ngamasu angenza ngcono inani lokuthandwa ongakuthola ngezikhangiso zakho ku-akhawunti yakho yomkhiqizo.
Thola ukuthandwa okuningi kwezikhangiso ze-Instagram
Ukuthandwa kubaluleke kakhulu empumelelweni yanoma yimuphi umkhankaso ku-Instagram. Kubonisa ukuzibandakanya nenhloso evela kubasebenzisi, okusho ukuthi uhamba ngendlela efanele. Lokho kusho, kungaba nzima ukwenza abantu bathande okuthunyelwe kwakho, ikakhulukazi uma ungumkhiqizo osanda kuqala. Sibonise ezinye izindlela ezingakusiza ukuthi uthole inani eliphakeme lokuthandwa lomkhiqizo wakho.
1. Yabelana ngezithombe namavidiyo asekhwalithi ephezulu
Indlela enhle yokuqinisekisa ukuthandwa ku-akhawunti yakho kulapho uthumela okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezimweni zezikhangiso ngoba zizobonwa ngabantu abaningi kakhulu kunabalandeli bakho kuphela. Izinhlobo eziningi zithatha umzamo omkhulu wokuqinisekisa ukuthi izikhangiso zazo ziphendulela amakhanda amaningi. Umkhankaso wesikhangiso owenziwe kahle unamathuba amaningi okusakazeka, ubeka uphawu ekukhanyeni. Nayi ifayili le- isibonelo sesikhangiso sekhwalithi ephezulu ku-Instagram
2. Dala amazwibela amahle
Ngenkathi okukhanga kakhulu i-Instagram ukuthi kuyisiteji sesithombe esivusa amadlingozi, amagama-ncazo eza eduze kwesibili uma kukhulunywa ngemikhiqizo ekhombisa ubuhlakani babo. Amagama-ncazo amahle atholakala ukukhulisa ukuqwashisa ngomkhiqizo nokusiza ukukhumbula umkhiqizo. Futhi, amazwibela ayisici sokuthunyelwe kwakho ongabuyela kuso ukuze uthole ukuthandwa okuningi uma isithombe singenele. A amazwibela amnandi futhi kungenza abalandeli baphawule, okungathuthukisa kakhulu ukuzibandakanya.
3. Sebenzisa ama-CTA kanye namaHashtag ngokuhlakanipha
AmaHashtag nama-CTA (ukubizela esenzweni) kuhle ekutholeni abantu ukuthi bazibandakanye, inqobo nje uma uwasebenzisa kahle. AmaHashtag ayingxenye ebalulekile ye- Isu lokubandakanya i-Instagram. Ukuze uhambise izikhangiso zakho kubantu abaseduze nawe, sebenzisa ama-hashtag asendaweni wezikhangiso zakho ze-Instagram. Futhi, unga bheka ama-hashtag adumile ku-niche yakho ukuthola abalandeli abaningi be-akhawunti yakho.
Ama-CTA asetshenziselwa ukunxenxa abantu ukuthi benze isenzo esinqumayo ku-akhawunti yakho ye-Instagram. Ama-CTA angumongo, futhi udinga ukuqonda ukuthi uwasebenzisela kuphi futhi kanjani. Abantu bazokwamukela i-CTA kuphela uma kukhona okuthile okuyigugu obanikeza bona. Ukwakha umuzwa wokuphuthuma lapho usebenzisa ama-CTA kuyisu elihle. Imisho efana chofoza manje ukuthola okuningi, itholakala kuphela ngesikhathi esilinganiselwe ziyizibonelo ezinhle zokwenza abantu bachofoze.
4. Thola Izikhathi Eziphelele Zokuthumela
Isici esibalulekile sokudweba ukuzibandakanya okuningi ku-akhawunti yakho ukuqiniseka ukuthi izikhathi zakho zokuthumela izikhangiso ziyaqondana nokuthi abalandeli bakho basebenza kakhulu nini. Asikho "isikhathi esifanele sokuthumela" ku-Instagram - kuyehluka ngezinhlobo zebhizinisi nendawo okuqondiwe kuyo. Lokho kusho, umthetho jikelele wesithupha ukuheha abathengi ukuthumela ngesikhathi amahora omsebenzi phakathi nosuku njengokudla kwasemini (I-11: 00 am to 1: 00 pm) noma ngemuva komsebenzi (7: 00 pm kuya ku-9: 00 pm). Lokho kusho, udinga futhi ukubhekisisa nendawo okhomba kuyo. Kukhona nokuthunyelwe okunemininingwane eminingi maqondana nesikhathi sokuthumela ku-Instagram kusuka I-Hubspot ukuthi ungabheka.
5. Ukuphakanyiswa kwe-cross-platform
I-Instagram ilungele ukuthunyelwa kwepulatifomu, okwenza kube yindawo enhle yoku khangisa ibhizinisi lakho vula. Ungasebenzisa okuphakelayo kwakho kwe-Instagram njengomthombo wezibuyekezo kwamanye amapulatifomu afana ne-Facebook ne-Twitter. Lokhu kungakusiza ikakhulukazi lapho uqhuba imincintiswano. Abantu bayakuthanda ukuwina imincintiswano, ngakho-ke ukuthola igama kwamanye amapulatifomu ezokuxhumana kungakusiza uthole ukuvezwa okwengeziwe komkhiqizo wakho. Futhi, ukusetshenziswa komkhiqizo okuningi i-URL ku-bio yabo ukuxhumanisa nekhasi labo le-Facebook lapho ungabaqondisa khona kwamanye ama-URL.
6. Thanda Futhi Ubeka Amazwana Ngezintambo Ezihlobene
Enye indlela ongakha ngayo inzalo ngama-akhawunti ahlobene ku-niche efanayo kulapho uzinika isikhathi sokuzibandakanya nabo ku-akhawunti yabo. I-Instagram ihlale isebenza kumthetho olula - ukuzibandakanya kokuzibandakanya. Ngakho-ke uma uxhumana ne-akhawunti yabo, ukhulisa amathuba akho wokudonsela ukubandakanyeka kubo futhi. Ungathola futhi abalandeli abaningi abanentshisekelo ku-akhawunti yakho kusuka lapho, okusho ukuthandwa okuningi kwe-akhawunti yakho ngokuhamba kwesikhathi.
7. Joyina i-Instagram Engagement Pod
I-pod ngumyalezo oqondile phakathi kweqembu labantu abase-niche efanayo ku-Instagram futhi abafuna ukukhulisa abalandeli babo, ukuthanda, noma ukubukwa. Umqondo oyisisekelo wanoma iyiphi i-pod ngukuthi noma nini lapho ilungu le-pod lithumela okuqukethwe okusha, abantu abaku-pod kulindeleke ukuthi bahlanganyele nakho. Lokhu kusiza okuthunyelwe kufinyelele phezulu kokuphakelayo kwabalandeli babo. Abantu bebelokhu besebenzisa ama-pods kusukela i-Instagram yenze ushintsho ku-algorithm yabo. Isibuyekezo sikhombisa okuthunyelwe ngokuya ngokuthandwa hhayi ngokulandelana kwesikhathi.
8. Yenza Izikhangiso Zakho Zikhange
Enye yezindlela ezingokwemvelo kakhulu zokuthola ukuthandwa okuningi kwesikhangiso sakho ukugxila kwikhwalithi yokuqukethwe. Udinga ukuqiniseka ukuthi izikhangiso zakho zinekhwalithi eyanele kuzo, ngakho-ke zivela kokunye okuqukethwe. Lokhu kufaka phakathi ukusebenzisa izithombe zobuciko nezicacile ukuheha izilaleli. Isibonelo sokuthi imikhiqizo ikwenza kanjani lokhu -
I-Starbucks ibine- #FrappuccinoHappyHour umkhankaso owasakazeka kakhulu. Bafeze lokhu ngemibala egqamile nokusetshenziswa kokudala kwesizinda ukudala okuthile okuhlukile abalandeli babo abakuthandayo.
Ukusonga - Wonke Umuntu Angathola Ukuthandwa Ku-Instagram
Ukusebenzisana kwabalandeli kuyingxenye enkulu ye-Instagram ngaphandle kokungabaza, futhi ukuthanda i-Instagram kuyindlela ejwayelekile kakhulu abantu abayisebenzisayo ukwazisa imikhiqizo ukuthi bayayithanda (akukho pun okuhlosiwe!) Okuqukethwe kwabo. Imikhiqizo isebenzisa izizumbulu zemali kwizikhangiso, futhi kwesinye isikhathi ayikwazi ukubenza basebenze.
Ngenkathi ukuthola ukuthandwa okuningi kwezikhangiso kungeyona inkimbinkimbi, udinga ukugxila kokuningi kunezici ezimbalwa ukuze uqiniseke ukuthi uzithola zilungile. Izinto ezifana nezikhathi zokuthumela, ikhwalithi yesithombe, namagama-ncazo yizinto ezibalulekile okufanele uzicabangele uma ufuna abalandeli bakho baphendule. Lezi zeluleko kufanele zikunikeze imibono yokuthi ungazuza kanjani kakhulu kumikhankaso yakho yezikhangiso ze-Instagram. Yabelana ngokuthi ukwazile kanjani ukuvuselela isu lakho lesikhangiso ukuthola imiphumela engcono.